AmaSharks ahlome ngeBhokobhoko kowamanqamu
UTHOMAS du Toit weCell C Sharks okuzoqalwa ngaye uma sebebhekene neVodacom Bulls ngoMgqibelo kowamanqamu eCurrie Cup Isithombe: BACKPAGEPIX
SIZOWUQALA umdlalo wamanqamu weCarling Currie Cup isikhondlakhondla samaCell C Sharks, uThomas du Toit, ophuma eqenjini lamaBhokobhoko, uma esebhekene namaVodacom Bulls, kusasa ntambama.
Umdlalo uzoqala ngo-5 ntambama, eLoftus Versfeld Stadium.
UDu Toit kuphoqeleke ukuthi ayishiye ikhempu yeqembu lesizwe e-Australia emasontweni amabili edlule, ngenxa yokushona kwesihlobo sakhe kodwa usewulungele umdlalo wakusasa.
Uzothatha isikhala sikaKhutha Mchunu, ozowuqala ebhentshini umdlalo. Olunye ushintsho olwenziwe eqenjini elihlule amaGriquas kowandulela owamanqamu nalo lwenziwe phambili. UKhwezi Mona uzothatha indawo kaNtuthuko Mchunu.
"Ngeshwa kuvele isifo kubo kaDu Toit, kwadingeka ukuthi abuye e-Australia. Uke wahlala ekhaya isikhathi esicishe sibe ngamasonto amabili kodwa usekulungele ukudlala kowamanqamu," kusho umqeqeshi wamaSharks, uSean Everitt.
"Njengenjwayelo uma kukhona abadlali ababuya eqenjini lesizwe siyaye sibaqalise umdlalo, kuzobanjalo nakuDu Toit. Udlale kahle eqenjini lesizwe futhi wayeyingxenye yeqembu elanqoba kwiNdebe yoMhlaba, uzokwenza umehluko omkhulu eqenjini lethu," usho kanje.
Imidlalo yamaSharks namaBulls ijwayele ukunqotshwa yiqembu elikhonyayo kuma-scrum futhi lingadali amaphenathi amaningi. U-Everitt ulindele okufanayo kusasa njengoba la maqembu ayevele ehlangane kowamanqamu kulo mqhudelwano ngesizini eyedlule.
"Womabili amaqembu kuzomele amelane nomdlalo osheshayo. Siyibonile indlela amaBulls aqale ngayo ngesikhathi edla iWestern Province kowandulela owamanqamu. Abeshisa kakhulu emizuzwini engu-20 yokuqala," kusho u-Everitt.
"Inselelo esilindele ukubhekana nayo leyo. Womabili amaqembu azobe enalo uvalo kodwa asejwayele ukudlala emidlaweni yamanqamu. Iqembu elizosheshe lehlise umoya lenze okufanele enkundleni, yilona elizoqala kangcono.
"Kuzomele siqikelele ukuthi asiwenzi amaphutha. Uma ubheka imidlalo yethu kulo mqhudelwano, siyazama ukuthi singawadali amaphenathi ukuze labo esidlala nabo singabaniki amathuba alula okuthola amaphuzu.
"Kowandulela owamanqamu, sizifakele ingcindezi ngamaphutha esiwenze esiwombeni sokuqala ngakho-ke kusemqoka ukuthi sikugweme lokho kusasa.
"Emdlalweni wamanqamu ngesizini eyedlule, sazenzela phansi ngokudala amaphenathi, amaBulls asheshe athola amaphenathi. Kumele sibanswinye kulokhu,“ kusho u-Everitt
AmaBulls azodlala ngaphandle kwesibabuli esigijima kwi-flyhalf, uJohan Goosen, otholakale ukuthi uneCovid 19. U-Everitt uthe ukungabi bikho kwalo mdlali kuzowenza umehluko kodwa iqembu likaJake White linabo abanye abasezingeni eliphezulu.
"Balahlekelwe kakhulu ngoba ungomunye wabadlali abavelele eqenjini labo. Ngiyavumelana no-Jake uma ethi ungomunye wabadlali abasezingeni eliphezulu emhlabeni kwi-flyhalf.
"Noma kunjalo, bayiqembu elihlangene kakhulu futhi badlale kahle kwiRainbow Cup bebophele uChris Smith kwi-flyhalf. Akaseyena umafikizolo, usedlale isikhathi esanele kwiRainbow Cup nakwiCurrie Cup futhi uwulungele lo mdlalo,“ kusho u-Everitt.
Iqembu lamaSharks elizodlala kowamanqamu: 15 Curwin Bosch, 14 Yaw Penxe, 13 Werner Kok, 12 Marius Louw, 11 Thaakir Abrahams, 10 Lionel Cronje, 9 Sanele Nohamba, 8 Phepsi Buthelezi (ukaputeni), 7 Henco Venter, 6 Dylan Richardson, 5 Gerbrandt Grobler, 4 Le Roux Roets, 3 Thomas du Toit, 2 Kerron van Vuuren, 1 Khwezi Mona
Ebhentshini: 16 Dan Jooste, 17 Ntuthuko Mchunu, 18 Khutha Mchunu, 19 Thembelani Bholi, 20 Reniel Hugo, 21 Lucky Dlepu, 22 Jeremy Ward, 23 Anthony Volmink